आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा अनर्गल प्रचार भएपछि मनोज गजुरेलले लेखे अस्पतालवाटै यस्तो स्टाटस – Daily NpNews
महिलामा यसकारण हुन्छ बाँझोपन, देखिन्छन् यस्ता लक्षण
सावधान ! पतञ्जलि, डाबर, बैद्यनाथ र झण्डुका यी खाद्य बस्तु परीक्षणमा भेटियो डरलाग्दो रसायन
फेसबुके मायाले घर न घाटको बनायो
काठमाडौँको नयाँपाटीमा आमाछोरी मृ´त फेला, श्रीमान ‘अ´चेत’ भेटिए
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा अनर्गल प्रचार भएपछि मनोज गजुरेलले लेखे अस्पतालवाटै यस्तो स्टाटस
आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा अनर्गल प्रचार भएपछि मनोज गजुरेलले लेखे अस्पतालवाटै यस्तो स्टाटस
काठमाडौ । चर्चित हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलको स्वास्थ्यलाई लिएर मिडियामा अड्कलवाजी गर्दै समाचार प्रकाशन भएपछि गजुरेलले आफै आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी गराएका छन् । उनले शुक्रवार साँझ एक स्टाटस लेख्दै स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
फेसवुक मार्फत गजुरेलले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताएका छन् । छोटो स्टटासमा उनले आफुलाई हिँजो भन्दा आज आराम महशुष भएको बताएका छन् । गजुरेल लेख्छन्, ‘आराम छु, आरामको कामना गर्दछु । हिजो भन्दा आज धेरै राम्रो भइरहेको छ। स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु हुने सबैमा धन्यबाद।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
हाँस्य कलाकार गजुरेललाई कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारमा प्रकाशन भएका समाचारलाई लिएर मनोजका परिवारका सदस्य केशवराज गजुरेलले पनि प्रतिकृया जनाएका छन् । शुक्रवार विहान देखि मनोजको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर बनेको भन्दै समाचार प्रकाशन भएका छन् ।
उनले त्यसरी प्रकाशन भएका समाचार प्रति आपत्ती जनाएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर अनर्गल प्रचार गरिएको त्यस्ता कार्य अपराजधन्य कुरा भएको बताएका छन् ।
एक स्टटास लेख्दै उनले गजुरेलको स्वास्थ्यमा सुधार भएको जनाएका छन् । उनलाई निमोनिया भएकाले स्वास्थ्य हुन केही समय भने लाग्ने बताइका छन् । केशव लेख्टन्, मनोज जीको स्वास्थ सुधार हुँदैछ । निमोनिया पछिको उपचार अलि पुर्ण सुधार हुन समय लाग्छ । अनाधिकारिक समाचार संप्रेशण गरेर भ्रम श्रृजना गर्नु अपराध जन्य कुरा हो । अस्वस्थ प्रचारमा नलाग्न सबै मिडिया एवं शुभचिन्तकमा अनुरोछ छ ।
सरकारले सार्वजनिक गर्यो चाडपर्व मापदण्ड, दशैं तिहारमा के गर्न पाइने,के नपाइने ?
महान श्रीमान बिनोदकी श्रीमती अनिताले गायिकासंगै गाइन रुवाउने गीत, जन्मदिनमा अनितालाई विनोदको यस्तो उपहार, रानी जस्तै सजीइन हेर्नुस